डोनाल्ड लुले सुनाए आफ्नो प्रेमकथा, भने- २८ वर्षअघि नेपाल घुम्दाघुम्दै हाम्रो माया बस्यो :: भानुभक्त :: Setopati
डोनाल्ड लुले सुनाए आफ्नो प्रेमकथा, भने- २८ वर्षअघि नेपाल घुम्दाघुम्दै हाम्रो माया बस्यो
नेपाललाई भारत सँगै राखेर होइन, छुट्टै हेर्छौं: अमेरिका
नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले शुक्रबार साँझ पत्रकारसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेका थिए।
अमेरिकी राजदूतको निवासमा भएको अन्तर्क्रियाको सुरूमै सहायक विदेशमन्त्री लुले आफ्नो प्रेम कथा सुनाए।
चिनियाँ मूलका बुवा र अमेरिकी आमाका सन्तान लुले पाकिस्तानपछि भारतको नयाँ दिल्लीमा दुई पटक गरेर ६ वर्ष बिताए।
भारतमा बस्दा उनले दक्षिण एसियाको भू-राजनीतिसँगै यहाँको कला, संस्कृति र सभ्यता चिन्ने मौका पाए। यो क्षेत्रमा भारतको प्रभाव पनि महशुस गरे।
भारतसँग अमेरिकाको सम्बन्ध सुमधुर भइरहेका बेला सहायक विदेश मन्त्री लुले दक्षिण एसियाका अरू मुलुकलाई भारतसँग नराख्ने बताएका हुन्।
नेपाल आउनुअघि सहायक विदेश मन्त्री लुले माल्दिभ्सको दुई दिने भ्रमण गरेका थिए।
नेपालमा अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो चासो यो मुलुक स्वतन्त्र र सार्वभौम भइरहोस् भन्ने रहेको लुले बताए।
अमेरिकी अधिकारीसँग कुराकानी हुँदा एमसिसीको प्रसंग छुट्ने कुरा भएन!
‘यसअघि नै धेरै समय भइसकेको छ। अझै धेरै ढिला गर्नु राम्रो हुँदैन,’ लुले भने।
नेपाली नेताहरूसँगको कुराकानीका क्रममा एमसिसीबारे उनीहरूको धारणा सुनेर आफू आशावादी भएको उनले बताए।
नेपालमा एमसिसीबारे केही गलत सूचनाहरू रहेको आफूले बुझेको उनले बताए। त्यस्ता गलत सूचनाका पछि कुनै बाह्य कारण छ भन्ने तपाईं ठान्नुहुन्छ? भन्ने प्रश्नमा सहायक विदेश मन्त्री लुले यसमा बाह्य असर हुनुपर्ने कारण नभएको बताए।
प्रजातान्त्रिक प्रणालीका आफ्नै जटिलता भएकाले निर्णय गर्न केही समय लाग्नु स्वभाविक भएको लुले बताए।
नेपालको राजनीति निकै जटिल भए पनि नेताहरू निकै फरासिला भएका आफूले पाएको उनले बताए।
‘यहाँको राजनीति निकै जटिल छ तर नेताहरू निकै फरासिला छन्। उनीहरू एक-अर्कासँग कुरा गर्छन् र आफूलाई लागेका कुरा भन्छन्,’ लुले भने,‘प्रचण्डलाई भेट्दा त मलाई रोचक लाग्यो। संसारका धेरै मुलुकमा युद्ध निकै रक्तपात भएर सकिन्छ। यहाँ त हिजोका विद्रोही अहिले नेता छन्।’
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर ३, २०७८, २०:०२:००